About Us - Forman fametrahana mazava Industry Co., Ltd.
Housing & Termina
mofo manify Connector
Fitaovana Ary Talent
Naorina tamin'ny 1999, Shenzhen Forman fametrahana mazava Industry Co., Ltd. (izay voambara antsoina hoe FPI) foana no fanoloran-tena fa ny R & D sy ny fanamboarana ny USB connectors, Pin lohapejy, FPC, manify, fiara singa sy ny nohitsakitsahiko / tsindrona koronosy connectors.
FPI manana ny lasitra famolavolana & fikarakarana atrikasa, nohitsakitsahiko atrikasa, tsindrona koronosy atrikasa sy ny fiara fivoriana atrikasa, izay afaka dia aoka isika hanana feno amin'ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny vokatra sy afa-be vola lany ho an'ny mpanjifa.
By izao, manodidina ny 240 FPI manana mpiasa sy ny orinasa 8400 metatra toradroa ary efa lasa certifications ny ISO 9001, ISO 14000. IATF 16949, ary lasa mpikambana ao amin'ny USB Miaraha amin'ny 2005.
Amin'ny maha-marina tsara sy ny singa connector mpamatsy, mpanjifa fahafaham-po tsara sy ny manana laharam-pahamehana ambony indrindra ao amin'ny orinasa. Ny tsara indrindra no nanaiky an-toerana sy iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tsena. Efa niara-niasa tamin'ny maro ny marika ao amin'ny orinasa ity, toy ny HUAWEI, Amphenol, Salcomp, sns
OEM / ODM fanompoana tsy ampy, sy ny FPI dia miandrandra ny mitsidika!
Ny Development History
Anual varotra nahatratra US $ 16m
Lean rafitra fitantanana voahadihady
IATF 16949 laza
Voalohany fivoriana automatical tsipika setup
Lasa USB RAHA Member
Naorina tamin'ny 1999
Office: No. 208, Huiheng Building, Nanshan District, Shenzhen, Sina
Foibe: Xinde-lndustrial, Citianpu Community, Gongming Town, Guangming New District, Shenzhen, Sina
tantera-drano USB 2.0am , USB 2.0 Type C , USB 2.0 , Square Pin Header, USB 2.0 Socket , Smt Pin Header ,